Abdishakur Ali Mohumed
Wallee “qaaf” ujeeddo leh, Qiimahayga kuma rido; Magac waa qasaanade, Wallee qado ma dhaafsado., - Abwaan Gaarriye (AHUN)
LAFOGURKA SHARCI EE QODOBADA XEERKA KUFSIGA SOOMAALILAND (Xeer Lr. 78/2018).PDF
Dhammaan qoraalladii taxanaha ahaa ee aan ku lafoguray Xeerka Kufsiga iyo Xadgudubyada Jinsiga (Xeer Lr. 78/2018) oo aan hal dhukumenti iskugu geeyey kala deg halkan: LAFOGURKA SHARCI EE QODOBADA XEERKA KUFSIGA SOOMAALILAND (Xeer Lr. 78/2018).
Garyaqaan Cabdishakuur Cali Muxumed
Posted by Abdishakur Ali Mohumed (Good Lawyer) at 12:31 AM Links to this post
Qaybta 3aad: Lafogurka Qodobada Sharci ee Xeerka Kufsiga (Xeer Lr. 78/2018)
Qaybtan 3aad ee lafogurka qodobada sharci ee Xeerka Kufsiga (Xeer Lr. 78/2018) waxa aan ku lafogurayaa qodobada la xidhiidha fal dambiyeedyada diyaar-garowga u ah fal
dambiyeedyada kale, kuwa la xidhiidha duubista iyo baahinta iyo qaybaha kale ee Xeerka. Waxaan sidoo kale ku soo gudbinayaa gunnaanad, tallooyin iyo soo jeedimo khuseeyo doodda xeerka kufsiga.
1. Fal dambiyeedyada diyaar-garowga ah (Inchoate Offences)
Qodobka 11aad: Maandoorin Si ku Talogal ah: “Qofka si ula kac ah ku kalifa maan-doorsoommidda qof kale oo aan raali ka ahayn, isagoo ujeeddadiisu tahay in uu ku sameeyo/ kula kaco ama in uu fursad u siiyo cid kale in ay ku samayso ama kula kacdo galmo ama fal jinsi ah qofkaas kale waxa uu galay dambi, waxaana uu mutaysanayaaa xadhig ciqaabeed u dhaxeeya shan ilaa toddoba sannadood.”
Qodobka 12aad: Afduub iyo Xadhig Sharci-darro ah: “Qofkasta qafaasha, afduuba, u qaata lahaystenimo ama u xidha si sharci darro ah qofkale si uu ugu la kaco kufsi ama fal xadgudub jinsi ahi waxa uu galay fal dambi afduub iyo xadhig sharci darro ah, waxaana uu mutaysanayaa xadhig ciqaabeed u dhaxeeya shan ilaa siddeed sannadood”
Madmadowga ku Jira Qodobadan: labadan qodob waxay dhigayaan fal dambiyeedyo diyaar-garow u ah fal-dambiyeedyo kale (preparatory offences or inchoate crime), waana sababta uu xeerku cinwaankooda uga dhigay ‘DIYAARIN FAL DAMBIYEEDYO’. Waxay kamid yihiin fal dambiyeedyada mararka qaarkood lagu khaldo iskuday fal dambiyeed sida iskuday kufsi ama ka faa’iiddeysi galmo haddii aan si taxadar leh loo qeexin. Qodobadan kuma cada wax lagu kala garan karo diyaargarowga iyo iskudayga kufsiga ama falka jinsiga ah sababtoo ah tiirarkooda kuma cadda wax kala soocayaa, isla markaana xeerkan dhammaantii kuma cada iskudayga kufsigu tiirarka uu ka kooban yahay – lama qeexin ba.
Iskudayga fal dambiyeed sidiisa ba wuu ka culus yahay fal dambiyeedyada diyaar-garawga ah sababtoo ah iskudaygu tusaale ahaan waa in qofku isagoo ay ujeeddadiisu tahay in uu kufsi ku kaco markii uu ku dhaqaaqay fulinta falka ku fashilmay keliya in xubintiisa taranku ay gasho xubinta taranka ee qofka kale balse fuliyey dhammaan tiirarkii kale ee fal dambiyeedka kufsiga ah. Halka fal dambiyeedyada diyaar-garowga ah ay ka yihiin talaabooyinka ka horeeya iskudayga ee ah diyaar-garowga sida qorsheynta iyo abaabulida fal dambiyeedka inta aan lagu dhaqaaqin talaabooyinkii iskudayga kufsiga.
Fal dambiyeedka maandoorinta ku talogalka ah nuxur ahaan waa in qofka falka ku kacay uu si badheedh ah oo kelifaad ah u sakhraamiyey qof kale oo aan raali ka ahayn iyadoo ujeeddadiisu ay ahayd in isaga ama cid kale u galmooto ama ay fal jinsi ah kula kacdo qofkaas. Sidaas darteed, tiirarka uu fal dambiyeedkani ku dhisan yahay ee loo baahan yahay in la caddeeyaa waa 1. In eeddaysanahu uu si badheedh ah oo ula kac ah ugu kacay falka maandoorinta ah; 2. In dhibanahu aanu raali ka ahayn oo uu eeddaysanahu ku kelifay ama ku qasbay in uu maandoorsoomo ama sakhraamo iyo 2. In ujeeddada maandoorintu ay ahayd in eeddaysanaha ama cid kale u galmooto ama fal jinsi ah kula kacdo dhibanaha.
Haddii eeddaysanahu aanu si badheedh ah ugu kelifin dhibanaha oo aanay jirin caddeyn muujinaysa kelifaad ama ku khasbid maandooriye, xitaa haddii la caddeeyo in dhibanahu aanu raali ka hayn isla markaana ujeeddada eeddaysanahu ay ahayd in dhibanaha loo galmoodo laguma xukumi karo fal dambiyeedkan sababtoo ah si ula kac ah umuu gelin falka. Sidoo kale haddii la caddeeyo in eeddaysanahu uu si ula kac ah u maandooriyey dhibanaha balse aan la caddeyn in ujeeddadiisu ay ahayd in isaga ama cid kale ay u galmooto dhibanaha, markaasna lagu qaadi maayo qodobkan oo ma qabanayo.
Sida sharciga ah qodobkan maandoorinta ee Xeerka Kufsiga waxa la adeegsan karaa keliya haddii ujeeddada maandoorintu ay la xidhiidho in lagu kaco galmo ama fal jinsi ah. haddii aanay sidaas ahayn se, waxa eeddaysanaha lagu eeddayn karaa faqradda 5aad ee qodobka 3aad ee Xeerka la Dagaalanka Mukhaadaraadka (Xeer Lr. 21/2002) haddii qof ay da’diisu ka yar tahay 15 sanno jir la siiyo mukhaadaraad ama maandooriye. Haddii se qof ay da’diisu gaadhay 15 sanno ama ka weyn la sakhraamiyo iyadoo loo qariyey ama lagu khasbay maandooriye ama cunto loogu daray, waxay dembi noqonaysaa keliya haddii qofkaas oo sakhraansan loo soo bandhigo dadweynaha – dibeda loo saaray oo dadku ogaaday ama dadka la ogeysiiyey.
Fal dambiyeedka afduubka iyo xadhiga sharci-darrada ah ee qodobka 12aad ee Xeerka Kufsiga waxa keliya oo qof lagu eeddayn karaa haddii la caddeyn karo in ujeeddadu ay ahayd kufsi ama xadgudub jinsi. Haddii aanay caddeyntaasi jirin afduub iyo xadhig sharci-darro ahna ay jiraan waxa lagu dhaqmi karaa qodobbada 433 iyo 486 Xeerka Ciqaabta Guud. Waxa se cajiib ah in fal-dambiyeedkan oo lagu sheegay diyaar-garow kufsi ama xadgudub jinsi ah uu ka ciqaab cuslaado iskudayga kufsiga laftiisa iyo fal dambiyeedka xadgudubka jinsi laftiisa oo ciqaabtiisu ay tahay ba hal ilaa saddex sanno sida ku cad qodobka 8aad. Xaqiiqadu waxay tahay afduubka iyo xadhiga sharci-darrada ah ayaa ka culus xadgudubka jinsi laftiisa oo uma noqon karaan diyaarin fal-dambiyeedkaas. Qofna looma afduubo ama looma haysto xadgudub jinsi oo keliya balse galmo waa loo afduuban karaa sababtoo ah xadgudubka jinsi waa fara-fareyn sida qabsashada ama xoodaaminta oo kale, intaasina afduubka dhexdiisa ayey dhacdaa ba – qof aan gacan la saarin lama ba afduubo – umana baahna diyaar-garow aan sakhraamin ahayn.
2. Duubis iyo Baahin
Qaybtan oo ka kooban saddex qodob oo kala ah qodobka 13aad (carruurta oo la daawadsiiyo fal jinsi ah), qodobka 14aad (isqaawin anshax-darro ah) iyo qodobka 15aad (duubis, qaybin iyo baahin muuqaalo fal lidi ku ah jinsi), waa qaybta sharci ahaan ugu muhiimsan uguna wacan xeerkan sababtoo ah fal dambiyeedyada lagu mamnuucay ayaa ah kuwo dhibaato culus iyo dhaqan xumo baahsan ku haya bulshadeena. Waa falal waxyeelo culus ku haya damiirka iyo akhlaaqda bulshada gaar ahaan carruurta iyo dhallinyarada. Sidaas darteed, waa qaybta ugu muhiimsan xeerkan kana mid ah meelaha uu xeerkani ku wacan yahay balse haddana qaab-qoraal ahaan iyo sharci ahaan ba aan ka madhnayd in la dhaliilo.
Madmadowga ku jira qodobadan: Qodobka 13aad oo wuxuu dhigayaa “Qof kasta oo si ula kac ah ugu qasba ama ugu kalifa qof carruur ah in uu daawado cid kale oo samaynaysa galmo waxa uu galay dambi, waxa uuna mutaysanayaa xadhig ciqaabeed u dhaxeeya shan ilaa todoba sannadood.” Fal dambiyeedka uu qodobku qeexayaa waa mid wax lagaga qabanayo falkan oo waxyeelo ku ah ama xumaynaya akhlaaqda iyo dhaqanka carruurta. Haseyeeshee, qodobku wuxuu fal dambiyeedka ku koobay in si ula kac ah qof carruur ah loogu qasbo in uu daawado dad isku galmoonaya. Taasi oo meesha ka saaraysa aragtida caamka ah ee ah sharci ahaan in carruurtu aanay marka hore ba lahayn awoodda garashada xumaanta ama raali ka ahaanshaha dembiga. Qofka carruurta ah uma ba baahna in la qasbo ama la kelifo sababtoo ah xumaanta iyo samaanta waxa u kala sheega ama uu ka bartaa waa dadka waaweyn. Qodobkuna taas ayuu khilaafsan yahay oo ma qabanayo qofka isagoon qasbin ilmaha u horseeda xumaanta noocan ah. Sidaas darteed tiirarka dambigan ee ah qasbida ama kelifaadu waa kuwo xanibaad ku ah wax ka qabashada in xumaan iyo dhaqan xumo loo horseedo carruurta, waxaanay ahayd in fal dambiyeedku u dhignaado sidan: “Qof kasta oo si ula kac ah qof carruur ah u daawadsiiya dad isku galmoonaya ama muqaal laga duubay waxa uu galay dambi.”
Qodobka 14aad ee xeerku wuxuu dembi ka dhigayaa in qof uu si ula kac ah iskugu qaawiyo ama marada uga faydo xubnahiisa taranka dadka dhexdiisa. Taasi oo ah anshax-darro uu qofku ku muteysanayo xadhig ciqaabeed u dhaxeeya 3 ilaa 6 bilood iyo ganaax lacageed oo u dhaxeeya 1,000,000 ilaa 2,000,000 oo shillinka Soomaaliland ah. Waa qodob qaab-qoraal ahaan iyo sharci ahaan ba si fiican u qoran oo aanay anniga shakhsi ahaan ii muuqan ceeb uu leeyahay.
Qodobka 15aad wuxuu mamnuucayaa in b) cod, filim ama sawir laga duubo ama qaado fal dambiyeed jinsi ah ama muuqaal kale oo khuseeya galmo ama fal lidi ku ah jinsi. T) la wadaaga ama qaybiya ama ganacsi ahaan u haysta cod, film ama sawir laga qaadey faldambiyeed jinsi ama muuqaal kale oo khuseeya galmo ama fal jinsi kale. Waxaan u fahmay in qodobku uu dembi ka dhigayo ka duubista ama qaadista cod, filin ama sawir fal dambiyeed jinsi ah oo dhacaya, balse maan fahmin waxa loola jeedo muuqaal kale oo khuseeya galmo ama fal lidi ku ah jinsi. Muuqaalka kale ee khuseeya galmo ma waxa loola jeedaa in la duubo muuqaal galmo oo aan fal dambiyeed ahayn sida galmo xalaal ah oo la duubo? Falka lidiga ku ah jinsiga se maxaa loola jeedaa? Maxay kala yihiin ama ku kala duwan yihiin codka, filimka iyo sawirka laga duubayo ama qaadayo fal-dambiyeedka jinsiga ah iyo muuqaalka kale ee khuseeya galmadu – ma isku mid baa mise laba wax ayey kala yihiin? Maxayse kala yihiin ama ku kala duwan yihiin fal-dambiyeedka jinsiga ah ee codka, filinka ama sawirka laga qaadayo ama duubayo iyo falka lidiga ku ah jinsigu? Ma kala qeexna oo ma kala cada waxa ay kala yihiin fal dambiyeedka jinsiga ah, muuqaalka kale ee khuseeya galmo iyo falka lidiga ku ah jinsigu. Sidaas darteed, nuxurka qodobkan waxaan u fahmay uun in ay dembi tahay in cod ahaan, muuqaal ahaan, sawir ahaan loo duubo ama qaado fal dambiyeed jinsi ah oo dhacaya ama wixii galmo la xidhiidha sida qof qaawan oo sawir ama muuqaal laga duubo ama hadal galmo khuseeya oo cod ahaan loo duubo iyo in sidoo kale la sii qaybiyo, dadka lala wadaago ama laga ganacsado waxaas la duubay. Faqradda 2aad waxay dembiga ka reebaysaa haddii ujeeddada duubista, qaybinta ama haysashadu ay ahayd in lala wadaago hay’addaha sharci fulinta. Faqradda 3aadna waxay dembiga ciqaabtiisa ku cusleynaysaa haddii ujeeddada falkani ay ahayd ganacsi..
3. Bilaabida iyo Oogida Dacwaddaha Fal-dambiyeedyada Xeerkan
Ugu horeyn waxa cad oo aan qarsoonayn in xeerku uu mudnaanta kowaad siinayo ilaalinta xuquuqaha dhinaca dhibanaha ah iyo daryeelkiisa. Xeerku ma aha oo umana qorna sida xeer caddaaladeed oo ay u siman yihiin dhinacyada dacwaddu – wuxuu ku dhisan yahay ilaalinta xuquuqaha dhibaneyaasha fal dambiyeedyada la xidhiidha galmada ama jinsiga (Victim based approach). Wuxuu sidoo kale ku dhisan yahay qaab kala sooc muwaadinimo oo jinsi ku dhisan. Waa xeer ay si toos ah ugu cadahay ujeeddooyinkiisa qoran ee loo dejiyey. Sidaas darteed, iyadoo aynu ogsoonahay xaqiiqada dhabta ah ee ah in ay aad u nugul yihiin dhibanayaasha lagu la kaco fal dambiyeedyada uu xeerkani khuseeyo oo ay u baahan yihiin tageero iyo gargaar dheeraad ah, haddana qofkasta oo aaminsan isla markaana jecel in muwaadiniintu ay si siman oo dhex ah u helaan caddaalad iyo sinnaansho, ma hilmaami karo ilaa xad dhibaatada iyo burburka nololeed ee ku dhaci kara qofka fal dambiyeed noocan ah oo aanu geysan si fudud loogu eedeeyo ama loogu xukumo. Dhibanaha xuquuqdiisu kuma jirto in xuquuqda eeddaysanaha lagu tacadiyo. Wixii labadooda u dan ah ayay danta bulshadeenu ku jirtaa, balse wixii dhinac qudha u dan ah ee dhinaca kalena tacadi ku ah waa burburkeeda iyo balanbalkeeda.
Ilaah baan kuu dhaartee burburka ay bulshada ku keenayso in hal qof si fudud oo caddaalad-darro ah loogu xukumo dembi aanu lahayn, kuma keenayso haddii toban dembiile ay maxkamaddi ku sii deyso caddaymo la’aan. Ujeeddada uu xeerkani uga dhinac noqday eeddaysanahu waa burbur bulsheed oo ummaddeena lala maagan yahay ee maaha mid ummaddeena ama qof dhibane ah wax loogu qabanayo.
Qodobka 17aad: Goorta Gudbinta iyo Bilowga Dacwaddaha Galmo “1) Majiro xilli u xaddidan b) Gudbinta dacwadda ama cabashada dhacdada fal dambiyeed jinsi, ama t) Billaabista oogista dacwad dhan ka ah la tuhunsane loo haysto fal-dambiyeed jinsi oo Xeerkan ku dhigan.” Annigu waxaan qabaa dacwaddaha noocan ah caddaymahooda iyo marag-muujintoodu in aanay wakhti dheer ba isbadel la’aan jiri karayn. Waxay kamid yihiin dacwaddaha u baahan in la bilaabo inta ay arrintu qoyan tahay ee caddaymahu aanay tirtirmin ama meesha ka bixin. Caqligana ma gasho shuruud la’aan in daba furan laga dhigo muddada ay tahay in dacwadda la gudbiyo.
Qodobku ereyga ‘xili’ ayuu adeegsaday balse dacwaddahu maaha xiliyeed (seasonal), cinwaanka marka la eegana ereyga ‘goorta’ ayaa la adeegsaday oo isna aan meesha ku haboonayn maadaamaa aanay jirin gelin ama saacad lagu xidho dacwaddaha gudbintooda. Qodobka 84aad ee Xeerka Ciqaabta Guud muddo 30 casho gudahood ah ayuu waajibinayaa in dacwadda ciqaabta ah lagu soo gudbiyo haddii cidi ay cabanayso. Qodobka 21aad ee Xeerka Habka Ciqaabtuna qodobkaas ayuu waafaqsan yahay, waxaanu dhigayaa shuruuddo ay ku buri karto adeegsiga xuquuqdani. Haseyeeshee, hore ba umuu jirin qodob xili gaar ah dacwaddaha soo gudbintooda loogu xaddiday, loomana baahna in xilli loo xaddido sababtoo ah muddo ayaa u xaddidan.
Markay noqoto bilaabista dacwad oogida fal dambiyeedyada xeerkan ku cad, waxa khasab ah oo dastuuri ah in la xaddido muddada qofka la tuhunsanaha ah loo hayn karo baadhis sida ku cad faqradda 5aad ee Qod. 27aad Dastuurka JSL oo dhigaysa ‘Xeerka ayaa xaddaynaya muddada ugu badan ee qof loo hayn karo baadhitaan’. Sidaas darteed, iska dhaaf in qodobku uu dhigayo in aanu jirin xili u xaddidan bilaabista dacwad oogidee, waxaa qayrul-dastuuri ah in aanu in aanu qodobku xaddidin muddada ugu badan ee uu eeddaysanahu xidhnaan karo dacwad oogid la’aan. Sidaas darteed, qodobkani waa mid khilaafsan sharciga dalka oo uu ugu horeeyo qodobka 27aad ee Dastuurka JSL.
Qodobka 20aad: Doorka uu Bileysku ku Leeyahay Baadhista Dacwaddaha: Sida uu qodobkani u dhigayo doorka uu bileysku ku leeyahay baadhista fal dambiyeedku waa mid khilaafsan dastuurka iyo xeerka habka ciqaabta labada ba sababtoo wuxuu bileyska awood u siinayaa in uu sameyn karo xadhig iyo baadhis dhammeystiran oo aanu maxkamadda iyo xeer-ilaalinta ogeysiin. Hadal ahaan faqradda ugu dambeysa ayey ku qoran tahay “in uu xishmeeyo oo fuliyo amarrada maxkamadda, oo uu sidoo kalena guto hawlaha iyo waajibaadyada kale ee la xidhiidha dambi baadhista ee uu dhigayo Habka Xeerka Ciqaabtu.” Taasi maaha mid qodobkan faqraddahiisa kale xalaalaynaysa sababtoo waxay bileyska awood u siiyeen wax sharciga khilaafsan oo ah sida ku cad faqradda ‘sh’ ee qodobkan ‘’in uu ku dadaaalo in la soo qabto oo la xidho la tuhunsanaha/eedaysanaha dambiga, wareysina ka qaado la tuhunsanaha/eedaysanaha marka la soo xidho, warka uu ka helona diiwaan galiyo gal dacwadeedka dacwadaasi u furan.” in uu ku deddaalo waxa ka horeysa sifaha loo qaban karo ama loo baadhi karo eeddaysanaha.
Faqradda 2aad ee qodobka 25aad ee Dastuurka JSL waxay dhigaysaa ‘ma bannaana in qofna la baadho, la qabto ama la xayiro, haddii uusan markaa dembi faraha kula jirin ama aanu amar qabasho oo sababaysan ku soo saarin Garsoore awood u lehi.” Haddii uu dambi faraha kula jiro kama ba hadlayo qodobkan 20aad ee xeerku oo wuxuu ka hadlayaa uun marka qof u soo dacwoodo ee ay dacwadu sidaas ku furanto. Hadda ba, qodobkani in uu toos uga hor imanayo qodobka 25aad ee dastuurku waa mid iska cad sababtoo ah qodobkan meel qudha kagama xusna in bilowga baadhista uu bileysku amar qabasho iyo baadhiseed uu ka dalbado maxkamadda ama xitaa ogeysiiyo qofka uu xidhay ama qabtay. Majirto faqrad keliya oo yaanay si cad ba u sheegine, muujinaysa qabashada eeddaysanahu in ay sababaysnaato. Faqraddaha qodobkuna waa kuwo awood u siinaya bileyska inay iyagoo ka duulaya cabashada dhibanaha iyo waxa laga qoray, ku deddaalaan inay soo qabtaan eeddaysanaha oo xitaa baadhis forensic ah ay sameeyaan deedna galka baadhista oo dhammeystiran uun ay xeer-ilaalinta u gudbin karaan. Taasi waa baadhis ka arradan xuquuqahii dastuuriga ahaa ee eeddaysanaha oo toos u khilaafsan qodobka 25aad ee dastuurka, waxaanay dhiirigelinaysaa in xadhig iyo baadhis sharci-darro ah ay kiisasku ka abuurmaan oo xuquuqda eeddaysanayaasha lagu tacadiyo.
Qodobka 25aad: Carqaladeyn Caddaaladeed: Qodobkani runtii waa mid yaabkiisa wata oo cajab badan sababtoo ah ma dhigayo fal dambiyeed ee wuxuu dhigayaa xukun fal dambiyeed. Maaha qodob u baahan in dacwad laga furo oo maxkamad horteed laga caddeeyo sababtoo ah isagaa ba maxkamad la’aan si toos ah u sii xukumaya qofkasta oo qodobkan loo qabsado. Faqradda 1aad waxay dhigaysaa “Qofka waxa uu noqonayaa dambiile, haddii uu faro galiyo gudbinta cabasho ama warbixin, dambi baadhista ama/iyo oogista dacwad fal- dambi ku cad Xeerkan si uu u horjoogsado, u leexiyo, u marin-habaabiyo, ama u carqaladeeyo hannaanka dhagaysiga ama geeddi socodka nidaamka caddaaladda.” Ugu horeyn, faqraddani waxay sii caddeysay in qofku aanu eeddaysane ba noqonayn ee uu si toos ah dembiile u yahay haddii loo qabsado falka faqraddan ku cad. Taasina waxay khilaafsan tahay faqradda 3aad ee qodobka 26aad ee Dastuurka JSL.
Mar labaadka, faro-gelinta gudbinta cabasho ama warbixin waa marxalad aanay dacwaddi furnayn oo dibada ka ah nidaamka caddaaladeed oo maba noqon karto carqaladeyn caddaaladeed. Mar saddexaadka, ujeeddada horjoogsashada, leexinta ama marin-habaabinta dhageysiga ama geedi socodka nidaamka caddaalada maaha mid lagu gaadhi karo faro gelinta cabashada ama warbixinta falka balse waa mid lagu kici karo wakhtiga dhageysiga, lamana qeexin marka la odhan karo marin-habow, leexin ama horjoogsasho ayaa ku timid dhageysiga ama geedi-socodka dacwadda. Taasi waxay keenaysa in markasta oo ay bileyska iyo xeer-ilaalintu ku fashilmaan baadhista dacwadda ay si fudud cid kale dusha uga saaraan guuldarada dacwadda ama ay dhibanaha iyo markhaatiyada ku qasbaan in aanay ka hor iman si kasta oo ay dacwadda u dhigaan haddii kale ay qodobkan ku fulin doonaan.
Faqradda labaad, waxay tacadi ku tahay xorriyada go’aan qaadasho ee dadka sababtoo ah waxay dembi ka dhigaysaa in labada dhinac ee dacwad fal dambiyeed xeerkan ku cad oo uu dhageysigeedu maxkamadda ka socdo ay ka heshiiyaan ama ay dibeda arrinkooda ku xaliyaan, kadibna codsadaan in dacwadda la oodo, eeddaysanahana la sii daayo. Arrinta heshiisku waa mid ay dhinacyadu xor u yihiin. Arrintan codsiga dacwad oodista iyo sii deynta eeddaysanahuna waa mid aan la lahayn ba saameyn dembi sababtoo maaha fal leh natiijo saameyn dembi oo codsigu maaha fal natiijadiisu ay ka iman karto codsadaha – waa mid ay go’aankeeda leeyihiin hay’addaha garsoorku.
Runtii waa wax lala yaabo in falkan aan dembiga ba noqon karayn lagu muteysto xadhiga ciqaabeed u dhaxeeya shan ilaa todoba sanno. Waxay ciqaabtiisu lamid tahay ama ka culus tahay todobada fal dambiyeed ee ugu culus xeerkan ciqaabta lagu muteysanayo iskudaygooda iyo afar fal-dambiyeed oo xeerka kamid ah ciqaabtooda. Saw markaa cajiib maaha in labadii qof ba toos loogu xukumo wixii ay ka heshiinayeen – hadduu jiray iyo haddaanu jirin ba - ciqaab ka culus dembigii uu midna dhibanaha ka ahaa midna eeddaysanaha ka ahaa. Maxay se tahay ujeeddada looga cusleeyey ciqaabta falkan aan dembiga ba lagu sheegin karayn ciqaabaha fal dambiyeedyada caadiga ah ee xeerka badankooda. Miyaanay ujeeddadu ahayn dembi tarmin iyo dacwaddo badin ilayn bileyskii waatan xor looga dhigay inay kiisaska abuuraan, qofkii dacwad ka noqdana waatan dembi culus laga dhigay, kii talaabo kale qaadana waatan la yidhi soo faro-galin carqaladeyn caddaaladeed ah.
Qodobka 27aad: Amarrada la Xidhiidha Badbaadada: Faqradda 2aad ee qodobkani waxay amarrada badbaadada ku daraysaa xaraf-faqraddeedka “b” oo dhigaya “in afar iyo labaatan saacadood gudahood lagaga soo qaado eedeysanaha wixii hub ah ee ku jira gacantiisa.” Runtii tani waa wax lagu qoslo sababtoo ah shay ama hanti uu leeyahay eeddaysanahu oo aan fal dambiyeed lagu gelin sharci maaha in loola wareego si sharci-darro ah haddii aanu fal dambiyeedka u adeegsan. Amniga dhibanahu uma xalaalaynayo bileyska in ay kaga qaadaan eeddaysanaha hub gurigiisa u yaala sababtoo ah dacwaddaha noocan amniga dhibanaha waxa ka khatar badan kan eeddaysanaha sababtoo ah isagaa ba wax loo tirsanayaa.
4. Qodobada la Xidhiidha Caddeymaha
Qodobka 33aad: Caddeymaha aan la Aqbali Karin: Faqradda 1aad ee qodobkani waxay si gaar ah u reebtay in taariikh-nololeedkii jinsi ee dhibanaha uu eeddaysanahu isku difaaco, iyadoo si cad u qiraysa in ay noqon karto caddeyn laysku difaaco ayey haddana si badheedh ah u sheegaysaa in aanay bannaanayn in laysku difaaco – “Ma banaanna in la xigto taariikh-nololeedka jinsi (sexual history or background) ee dhibanaha fal dambi jinsi oo noqon karta caddeyn loo addeegsado is difaac.” Halkaa kuma joogayso ee waxay sii daba dhigaysaa “ama loogu andacoodo (dooddo) b) in ay u muuqato in dhibanahu ogolaaday falka galmo ama jinsi ee dacwaddu khusayso; ama t) marag kaca dhibanahu yahay mid aan la aamini karin ama daacad ahayn.”
Faqradda 2aad ayaa iyadna sidaas si lamid ah uga reebtay eeddaysanaha in uu isku difaaco caddeynta macaamilka ka dhaxeyn jiray dhibanaha. Waxaanay dhigaysaa “Ma banaana in uu eedeysanahu ama cid kale oo mataleysa qofka ku eedeysanaha dacwad jinsi khusaysa sida ku cad Farqadda 1aad ee Qodobkan oo ay caddeyn ahaan u soo bandhigto in uu dhibanahu la yeeshay ama horey uga ogolaaday eedeysanaha ama cid kale fal jinsi ah oo aan ahayn ka ay dacwadu khusayso.” Bal hadda cajaa’ibtan eega, qof lagu eeddaynayo in uu qof kale khasbay oo la leeyahay kuma dooddi karo in uu caddeeyo:
o in aanu khasab jirin oo hore ba ay iskugu galmoon jireen oo ay wada galeen dembiga
o in aanu muujin karin ama caddeyn karin in ogolaansho jiray oo aanu khasab jirin iyo
o In dhibanaha soo dacwooday ee wax sheeganayaa uu haddana isagu isku yahay markhaati wax ku caddeynaya isaga (eeddaysanaha), isaguna aanu ku dooddi karin in aan la aamini karin ama aanu daacad ahayn oo aanu isla qofkii soo dacweeyey markhaati noqon karayn.
Qodobkani waa mid meel ka dhac ku ah nidaamka caddaaladeed iyo dhexdhexaadnimada garsoorka sababtoo ah waa qodob nuxurkiisu iskugu soo biyo shubanayo in dhibanahu iska daa wax kalee uu xitaa yahay markhaati aan la duri karin iyo in eeddaysanahu aanu xitaa isdifaaci karin. Waa qodob qayrul-dastuuri ah oo khilaafsan faqradda 2aad ee qodobka 28aad ee Dastuurka JSL.
Qodobka 34aad: Xaaladdaha Cusleeya Ciqaabta: Qodobkani wuxuu taxayaa xaaladdaha cusleeya ciqaabta oo iskugu jira kuwa taagnaa wakhtigii falka lagu kacayey iyo kuwo la xidhiidha dhaqanka eeddaysanaha. Intooda badan waa kuwo sax ah oo lagu muteysan karo in ciqaabta la kordhiyo. Haseyeeshee, xaaladdaha ay kamid yihiin b) dhibannaha oo ah qof carruur ah; k) eeddeysanaha oo ah qof ku tagri falay ama si qaldan uga faa'iideystay meeqaam xileed, mas'uuliyadeed ama aaminaadeed; ama I) haddii cidda dambiga gashay ay tahay laba qof ama ka badan, waa kuwo khuseeya qodobbo gaar ah oo aanu qodobkani caddeyn sida loo kala dabaqayo fal dambiyeedyada ay marka hore tiirarkooda ku jiraan iyo qodobada kale.
Qodobka 35aad: Xaaladdaha Fududeeya Ciqaabta: Qodobku wuxuu dhigayaa afar xaaladdood oo keliya oo fududeeya ciqaabta isla markaana iyagu dhammaantood sharci ahaan aan sax ahayn. Waxaan annigu u arkaa in laga badheedhay oo loogu talogalay in aan xeerka lagu darin xaaladdo ciqaabta fududeyn kara oo sharci ahaan sax ah.
1) Xaaladdaha fududeynaya ciqaabta ee xeerka ku cad waxa ugu horeysa eeddaysanaha oo ah qof carruur ah oo da’diisu ay tahay 15 jir ilaa 18 jir. Waxyaabaha la yaabka leh waxaa kamid ah in qodobka 2aad ee Xeerku uu kelmada ‘carruur’ ku qeexayo “qof da’diisu ay ka yar tahay 18 jir.” Haseyeeshee, inkastoo xitaa wax ka badelkii Golaha Guurtida ay ku jirtay oo laga dhigay ‘qofka kasta oo ay da’diisu ka yar tahay 15 jir’, oo Golaha Wakiilladu cod aqlabiyad ah ku diidday wax ka badelkaas, wax macno ah oo ay xeerka ku kordhinaysaa ba ma jiro sababtoo ah 12 jeer oo carruurta laga hadlayo ba waxaa la xusayaa 15 jir. Halka 18 jirku ay xeerka kaga jirto mar kaliya marka laga yimaad qeexida, markaasina ay tahay markan qofka carruurta ah ee ay da’diisu tahay 15 jir ilaa 18 jirka laga fududeeyey ciqaabta.
Macnaha meesha ku jiraa waa in qof da’diisu ay ka hooseyso 15 jir aanay lahayn masuuliyad dambi. Taasi oo dhan marka laga eego waafaqsan shareecadda islaamka iyo dhaqanka bulshada. Haseyeeshee, waxa iyadna meesha ku jirta in carruurta ay da’dooda u dhaxayso 15 jir ilaa 18 jir ay leeyihiin masuuliyad dambi oo la fududeeyey oo ciqaabta laga dhimi karo saddexdii meelood meel ahaan sida ku cad Qod. 117 Xeerka Ciqaabta Guud. Arrintani se ma waafaqsana Shareecada Islaamka oo waxay masuuliyadda dembi kala siman yihiin dadka kale.
2) Xaaladda labaad ee fududeynaysa ciqaabta ee xeerka ku cad waa “eeddaysanaha oo ah qof da’a ah ama gaboobey.” Waa mid khilaafsan shareecada islaamka oo iyadu qabta in qofka weyni uu ka ciqaab culus yahay qofka dhallinyarada ah gaar ahaan dembiyada waaweyn sida sinnada ama kufsiga. Waxa kamid ah xadiiska ku yaal saxiixul muslinka ee uu Rasuulku SCW ku sheegay ‘Saddex ilaahay aakhiro lama hadlo; Oday sinneystay, qof madax ah oo beenaale ah iyo wax ma hayste kibir badan.’ Saddexduba maaha kuwo laga filayo falalka ay ku kaceen oo cudurdaar maleh.
3) Xaaladda saddexaad ee fududeynta ciqaabta ee xeerkan ku cad waa tan ugu la yaabka badan, waana “eeddaysanaha oo ah qof maskaxda ka buka.” Waa xeerkii ugu horeeyey oo qof maskaxda ka jiran ka dhigaya dembiile ee aan arko. Wallee annigu ka yaabay xeerkani sida uu u caashaqsan yahay qof kasta oo magaca dhibane wata iyo colaada miyir beelka ah ee uu u hayo qof kasta oo eeddaysane lagu sheego. Wax sharaxaaad u baahan ba maaha oo waxba ku tiigaali maayee, xeerku waa xeerkaas qofka waalan xukumaya een sharci iyo shareeco toona u eegin.
4) Xaaladda afraad ee fududeynta ciqaabta fal dambiyeedyada xeerkani waa “eedeysanaha oo ah mid la sakhraamiyay ahaana qof sakhraansan markii uu dambiga galayay.” Iyadna waa yaabka yaabkiise sawka qodobka 11aad ee isla xeerkani fal dambiyeed ka dhigaya in qof la sakhraamiyo ama maandooriyo si loogula kaco galmo? Qofka la sakhraamiyey ee galmo ku kaca – rag iyo dumar ba – ma dhibanaa mise waa eeddaysane? Hore ayaan se uga hadlay sababta isagoo dhibane ah looga dhigay eeddaysane. Xeerku waa xeerkaas sharciga, shareecada, dhaqanka iyo caddaaladda ba ka madhan ee xaajadiisu ay tahay xeelad badanleeydaas aan xaq dhawrka lahayn.
Qodobka 37aad: Warka uu Dhiibo ama Bixiyo Dhibanahu: Xeerkan cajaa’ibtiisu ma yaree, wax uu soo socda ba wuxuu iskugu soo biyo shubanayaa halkii uu nuxurka ugu muhiimsan ee xeerka ba laga lahaa uu ku jiray oo ah 1) in dhibanahu uu yahay markhaati wax caddeeya oo weliba xogta uu isagu sheegaa ay tahay caddeynta ugu culus ama ugu muhiimsan iyo 2) in si ay maxkamaddu u go’aamiso xukunka lagu ridayo ama lala tiigsanayo dambiile lagu xukumayo qodobada xeerkan ay maxkamadda u bannaan tahay in ay tixgeliso ama ku xisaabtanto warka ama xogta uu afka ka sheegay ama laga qoray dhibannaha ee tilmaamaysa dhibta iyo dhaawaca ka soo gaadhay fal dambiyeedka loo geystay.
Haddii intaas uun lagu joogee, faqradda 2aad waxay sii caddaysay ba in warka ama xogta dhibannahu ay ku filan tahay in loo cuskado xukunka eeddaysanaha lagu riday waxaanay odhanaysaa “Xogta ama warka uu bixiyo dhibanuhu ee ee loogu gudbiyay maxkamadda sida waafaqsan Qodobkan, kama reebeyso maxkamada inay tixgaliso ama ku xisaabtanato caddeyn kale oo kasta oo ay u aragto inay muhiim u tahay goaan ka gaadhista ciqaabta la saarayo dambiilaha.” Macnaha maxkamaddu kuma ba khasbana caddeyn kale oo lagu kaabo waxa uu dhibanahu sheegee, way u bannaan tahay hadday u aragto in ay muhiim tahay.
Hadda fal dambiyeedyadan qofkii soo dacwooday afkiisa loogu xukumayo eeddaysanaha, waxa ku jira kuwo uu ILAAHAY ciqaab xad ah u dhigay oo ay shareecadu waajibisay in afar qof wax ka yar aanay caddeyn karin sida kufsiga sinnada aanu qofka kale raalida ka ahayn uun ah, kufsi loo galmooday ilmaha yar oo sinno ah, kufsiga loo galmooday qof aanay maskaxdiisu dhammayn oo isna sinno ah iyo kufsiga qasabka ah ee hubka loo adeegsado qofka loo galmooday oo xiraabo ah iwm. Waynu roonahay haddii uu ILAAHAY innaga saamaxo nidaamkeena dawladdeed ee sidaas u dhalan-rogay shareecadda Islaamka iyo nusuustii uu innoo soo dejiyey.
Qodobka 38aad: Ciqaabista Dambiilayaasha sida Wadajirka ah Dembiga u Gala: Markii aan falan-qaynayey qodobka 5aad ee xeerka oo jideeyey fal dambiyeedka “kufsi wadareedka”, waxaan tilmaamay in eeddaysanayaasha lagu wada eeddaynayo kufsi wadareedka aan la kala saarin marka laga hadlayo faqradda 3aad ee jidaynaysa in haddii dhaawac culus ama xanuunka AIDS-ka uu dhibanahu qaado ay ciqaabtu noqonayso xabsi daa’in. Waxaan ku doodday “maadaamaa hal shakhsi uu dhaawaca geysan karo ama uu xanuunka AIDS-ka wada qaadsiin karo dhibanaha iyo eeddaysanayaasha ba, waxay ku fiicnayd in si cad loo qoro in masuuliyadaas uu leeyahay qofka dhaawaca gacantiisa ku geystay ama xanuunka laga helo sababtoo ah dadka wada eeddaysan dembiga masuuliyadiisa way wadaagaan waanay kala leeyihiin sababtiisa (joint and several liablity).”
Qodobkani wuxuu dhigayaa “Qof kasta oo haga, amra, dhiirigaliya, la taliya, abaabula, qasba, bilaaba, huriya, kala shaqeeya, gargaara ama qof kale ku caawiya inuu galo dambi ka dhan ah qodobada Xeerkan wuxuu muteysanayaa xukun ciqaabeed ku haboon dembiga inta uu ku leeyahay sida waafaqsan xeerka ciqaabta guud.” Marka qodobka sidan u qoran lagu sheegayo dembiilayaal si wadajir ah dembi u galay, malaha ereyadani waa kuwo qodobka uun lagu qurxiyey oo maaha kuwo macnahooda dhabta ah loogu talogaley in ay ka turjumaan. Nuxurka qodobku waa dambiga ay dad badan ka qayb-qaataan (participation) gelitaankiisu in qof walba uu muteysanayo xukun ciqaabeed ku haboon dembiga inta uu ku leeyahay sida waafaqsan Xeerka Ciqaabta Guud.
Inkastoo Xeerka Ciqaabta Guud qodobkiisa 71aad ay ku cadahay ka sinnaanta ciqaabta dembiga ay u siman yihiin dadka fal dambiyeedka ka qayb-qaataa, haddana, faqradda 1aad ee qodobka 73aad ayaa gaar u xusaysa [masuuliyadda iyo kaalinta ay dembiga ku kala lahaayeen darteed] in ciqaabta gaar loogu kordhinayo: b) qof kasta oo u bilaaba, abaabula ama haga talaabooyinka dadka kale ee fal dambiyeedka ka qayb-qaadanaya; c) qof kasta oo masuul ah oo awooddiisa [qasab], hagidiisa ama amarkiisu uu dadka uu maamulo ku sababo in ay fal dambiyeedka ku kacaan. Faqradda 2aad ayaa si cad u sheegaysa in ciqaabta lagu kordhinayo xaaladaha ku cad xarfo-faqraddeedyadan la dabaqayo xitaa haddii dadka fal dambiyeedka laga qayb-gelinayo ama ku kacayaa aanay lahayn masuuliyad dembi.
Qodobka 75aad ee Xeerka Ciqaabta Guud wuxuu ciqaabta ka khafiifinayaa qaar kamid dadka si wadajirka uga qayb-qaatay fal dambiyeedka: 1) Haddii Garsoorahu uu u arko in ay aad u kooban tahay gargaarida ama kala shaqaynta uu qof ka qayb-qaadanayey fal-dambiyeedku ku lahaa diyaarinta iyo fulinta fal dambiyeedka wuxuu ka dhimi karaa ciqaabta sida waafaqsan qodobka 119 XCG. 3) ciqaabta wuxuu sidoo kale ka dhimi karaa dadka lagu sababay in ay ku kacaan ama ka qayb-qaataan fal dambiyeedka sida ku cad xaaladaha ku cad xaraf-faqraddeedka c) iyo d) ee faqradda 1aad ee qodobka 73aad ee Xeerka Ciqaabta Guud.
Qodobka 45aad: Burid iyo Laalid: Ujeeddada kowaad ee xeerka waxaa lagu sheegay “in la dejiyo xeer waafaqsan shareecada islaamka, dastuurka qaranka JSL, mabaadi’da guud ee caddaalada, qiyamka iyo dhaqanka suuban ee ummaddu leedahay”, faqradda 2aad ee qodobkan 45aad na waxay dhigaysaa “Xeer kasta oo kale ama qodobkasta oo sharci ama Xeer dhaqameed kasta oo ka soo horjeeda, ama aanan waafaqsanayn xeerkan waa la buriyay waxaana lagu baddalay qodobada Xeerkan.” Dhega! Xeerkii dhaqanka ummadda la waafajinayey sawkan buriyey ee laallay dhaqanka laftiisii ee qodobadiisa ku badalay. Maxaa kuu baxay?
TALLOOYIN IYO SOO JEEDIMO
1. Ugu horeyn, annigu shakhsiyan Cabdishakuur ahaan, ujeeddada aan bulshada ula wadaagayey aragtidayda shakhsiga ah ee aan ka qabo Xeerkan Kufsigu waxay ahayd inaan aaminsanahay in xeerkan aynu bulsho ahaan aad uga baahnayn balse aynu ku hungoownay oo aynu kala kulanay wax aynaan uga fadhiyin oo bulshadeena diinteeda, dhaqankeeda iyo masiirkeeda ba khilaafsan. Xaaladda aynu ku suganahay na maaha mid aan is leeyahay cid bay farxad gelinaysaa oo jecel in xaaladan lagu sii jirno oo aaminsan in aan xeer-ciqaabeed cusub loo baahnayn.
Xeerkan kufsiga oo keliya kuma koobna ceebaha sharci ee aynu dugsanaynaa oo Xeerka Ciqaabtu ba wax badan ayuu la wadaagaa waxyaabaha aynu xeerkan ku diiddanahay khaasatan markay noqoto waafaqsanaanta Shareecada Islaamka. Sidaas darteed waa in lagu baraarugsanaadaa oo aynaan xeerkan uun ku koobin doodda oo aynu fursadan uga faa’iideysanaa in la saxo dhammaan xeerarka aan waafaqsanayn diinta iyo dhaqanka ummadda si loo helo xeerar ka turjumaya mabaadi’da sharci ee uu ku dhisan yahay Dastuurka JSL oo ay ugu horeyso Shareecada Islaamku.
2. Qaabka fudud ee loo ansaxiyey iyo geedi-socodkii lagaga soo shaqeeyey Xeerkan Kufsigu waxay inoo muujinayaan sida fudud ee ay suurtogal u tahay in la afduubo masiirka ummadda isla markaana loo adeegsan karo Golayaasha Qaranka gaar ahaan Xeer-dejinta oo karaamada iyo awooddii shacabka ee ay huwanayeen lagu shaqaystay.
Sababta keliya ee ay taasi u dhacday waa mid aynu garan karno oo ah in aynu nahay ummad tasoowday oo qof walba uu dannihiisa gaarka ah eryanayo isagoon aan xitaa xeerinayn diin, dan guud iyo masiir ummaddeed midna. Sidaas darteed, la yaab maleh in la innoo keeno xeerar aanay danteenu ku jirin oo aan diinteena iyo dhaqankeena toona lagu saleyn. Waanay socon doontaa oo maaha mid si dhibyar u joogsan karta ilaa inta aynu ka baxayno tasoowga aynu ummad ahaan ku jirno.
Hore ayaan laba sanno kahor u tilmaamay halka ay sartu ka qudhantay iyo sababta aynaan xitaa waxba uga qaban karin arrimaha noocan ilaa aynu ummad ahaan la nimaad han ummaddeed oo aynu kaga xoroobi karno aragtiyaha iyo afkaarta ay cid kale leedahay ee aan xal u ahayn mashaakilaadka sharci ee inna haysta. Waxaad ka akhrisan kartaa qoraalka aan mawduucan kaga kaga hadlay laba sanno kahor ee cinwaankiisu uu yahay Nidaamka Caddaaladeed ee Soomaaliland: Himilooyinkiisa Qoran, Ummadda Tasoowday, Bahdiisa Hanka yar iyo Qaranka Hagraday. Qoraalkan ayey ku dhan yihiin tallo iyo tusaale wixii khuseeya nidaamka sharci iyo caddaalada ee aan u gudbin lahaa bulshada gaar ahaan Mihnadlayaasha Sharciga.
3. Waxa iyadna mushkilad ah in bulsho ahaan aynaan arrimahan noocan ah ugu dooddi karin si mawduuci ah oo ku kooban fikirka uu qofku diiddan yahay ama uu difaacayo, balse sida hadda muuqata dadka qaar ay cid gaar ah dhaleecaynayaan, qolooyinkii xeerka loo soo dhiibayna doodda qudha ee ay dhiiban karaan ba waxay noqotay “waxa xeerka diiddan ragga oo dumarka dhibaatadooda jecel iyo dad kufsiga bannaysanaya ama wax kufsan jiray.” Dadka sidaas u hadlayaa waa dad aqoonyahan sheeganaya iyo xildhibaanno golaha wakiilada ka tirsan. Sidaas darteed, waxaan soo jeedin lahaa in si ikhlaas ah looga hawl galo arrimaha noocan ah oo aynu ka baxno annaaniyada, danneysiga iyo isku muuqashada. Xeerka dooddiisu waa mid sharciyeed oo ay shareecaddu ugu mudan tahay – wixii diinta khuseeyaana wax lagu dheeldheeli karo maaha. Mana qurux badna in warbaahinta iyo social media-ha uun ay ku koobnaato doodduye waxa loo baahan yahay in hannaanka sharci ee lagu sixi karo loo maro sixitaanka xeerka oo doodda loo gudbiyo Goleyaasha Qaranka iyo Maxkamadda Dastuuriga ah, ciddii difaacaysaana halkaas ha ka difaacdo. Sidaas darteed, waxaan ku talinayaa oo aan soo jeedinayaan soo jeedimahan hoos ku faahfaahsan:
Sharciyaqaannada, Aqoonyahanka, Siyaasiinta iyo Culimada waxaan u soo jeedinayaa:
· In laga wada shaqeeyo sidii xeerkan iyo kuwo kale ba loo sixi lahaa si loo helo xeerar ku dhisan Shareecada Islaamka iyo Dastuurka JSL.
· In ay sameystaan shabakado ay ku mideysan yihiin oo u taagan la socoshada xeerarka iyo shuruucda dalka dejintooda iyo fulintooda ba
· In la derso nidaam ahaan qaabka xeer-dejineed iyo geedi-socodka ay maraan xeerarka uu baarlamaanku dejiyo.
· In ay xidhiidh wada shaqeyneed la yeeshaan Golayaasha Qaranka iyo urrurada bulshada ee madaxa-bannaan.
· In ay si dhoow ula socdaan habka shaqada nidaamka caddaaladeed ee dalka isla markaana xoojiyaan la xisaabtanka xukumada iyo garsoorka
Golaha Wakiillada iyo Xukumadda waxaan u soo jeedinayaa:
· In aanay dhayalsan xilka iyo waajibaadka gole ahaan loogu igmaday isla markaana sida ku cad faqradda 1aad ee qodobka 38aad ee dastuurka JSL in ay reeban tahay in xeer-dejinta loo wareejiyo cid kale. U dhaqma oo ha idinka muuqato in aad tihiin XEER-DEJIYEYAAL oo yaanay dib u dhicin in aad ahaataan ANSAXIYEYAAL XEER AANAY DEJIN.
· Xasuusnaada in sida ku cad qodobka 38aad, faqraddiisa 4aad: “himilooyinka xilgudashada baarlamaanka ay ugu muhiimsan tahay t) In Jamhuuriyadda Soomaaliland ay yeelato dhammaan xeerarka ay u baahan tahay dawlad Islaami ah.”
· Ogaada in xubin kasta ay ku dhaaratay "WAXAAN ILAAHAY UGU DHAARTAY IN AAN U NOQONAYO DAACAD DIINTA ISLAAMKA, DALKAYGA SOMALILAND, DADKIISANA KU MAAMULAYO SINNAAN IYO CADDAALAD INTA AAN XILKA HAYO".
Urrurada Bulshada ee aan Dawliga ahayn waxaan u soo jeedinayaa:
· Haddii ay idinka dhab tahay in aad bulshada meteshaan waa in aad ilaalisaan dhaqankeeda, diinteeda iyo masiirkeeda ba.
· Ha noqonine kuwo mashaariicda iyo aqoonta keliya ee ay bulshada ugu adeegayaan ay tahay wixii ay wax ku bixiyaan ee ay idiin dhiibaan Urrurada Caalamiga ah iyo hay’addaha QM xataa haddii aanay ka turjumayn rabitaanka iyo qiyamka bulshada aad mateshaan. Ha idinka muuqato aqoonta iyo kartida aad iskaga baandhayn kartaan isla markaana kaga kaaftoomi kartaan mashariicda shisheeyahu idiin dhiibo ee aydaan curintooda iyo fikirkooda midna lahayn ama aanay bulshada danni ugu jirin.
· Waxa aad ka duulaysaan ha noqdo diinta iyo dhaqanka bulshada oo yaan idinka la idin doorin si aydaan idinkuna bulshada dhaqankeeda iyo diinteeda u doorin.
AYNU ISA SAAMAXNO OO ILAAHAY HA INNOO DEMBI DHAAFO, DARIIQA SAXDA AHNA INNA WAAFAJIYO. AAMIIN.
Qalinkii: Garyaqaan Cabdishakuur Cali Muxumed (Good Lawyer)
LIFAAQ: Goleyaasha Xeer-dejinta Soomaaliland Maxay ku Kordhiyeen Xeerka?
Kalfadhigii 29aad ee Golaha Wakiilada, fadhigiisii 11aad oo qabsoomay 14kii bisha Diisember 2015 ayaa loo qaybiyey mudanayaasha Golaha Wakiillada qabyo-qoraalka Xeerka Kahortagga Kufsiga iyo Xadgudubyada la xidhiidha oo ka koobnaa 23 bog oo 46 qodob ah. Golahaas dhan waxa uu xeerka hadda dhaqan-galka ku soo kordhiyey ama lagu daray talaabooyinka hoos ku cad:
1. Magaca qabyo-qoraalka oo ahaa “Xeerka Kufsiga iyo Xadgudubyada Xidhiidhka Laleh (Xeer Lr./----/2015)” waxaa lagu badelay “Xeerka Kufsiga iyo Xadgudubyada Jinsiga ah (Xeer Lr. 78/2018.)”
2. Gogoldhiga (preample) waxaa lagu daray “Markuu arkay Qodobada 77aaad iyo 78aad ee Dastuurka Soomaaliland.”
3. Qodobka 1aad oo ahaa “Magaca Xeerka” waxaa loo badelay “Erey-bixin”.
4. Erey-bixinta kelmada “" Xadgudub Galmo (Sexual Act)” Waxaa loola jeedaa galmo toos ah ama fal kale oo lagu xidhiidhin karo galmo oo lagula kaco qayb ama xubin ka mid ah jidhka qof si loo kiciyo dareenka ama loo dhaawaco hammadda galmo ee cid kale.” Waxaa lagu badelay “" Fal Jinsi (Sexual Act)” Waxaa loola jeedaa galmo, ama fal kale oo khuseeya, ku luglahaansho, fal jinsi loo aannayn karo oo lagula kaco xubnaha taranka, dabada, afka ama xubno kale oo ka mid ah jidhka.”
5. Erey-bixinta kelmada “kufsi” waxaa loola jeedaa galmo aan sharcigu jidayn oo iyadoo loo addeegsanayo xoog, cabsi galin ama hanjabaad uu qof kula kaco qof kale oo ay kala jinsi yihiin ama la jinsi ah ; waxaana loo arkayaa in uu kufsigu dhacay marka xubinta taranka ee qofka falka ku kacayaa, xaddigay doontoba ha gaadsiisnaato’e gasho ama lagaliyo xubinta taranka ama xubin kale oo ka mid ah jidhka qofka kale. Waxaa lagu badelay “galmooda/galmoodo” (Sexual Penetration) waxaa loola jeedaa gelitaanka xaddigay doontoba ha gaadsiisnaato’e xubinta taranka ee qof ay gasho xubinta taranka, dabada ama afka qof kale”
6. Erey-bixinta kelmada " Wasaaradda" Waxa loola jeedaa Wasaarada Arimaha Bulshada iyo Shaqada. Waxaa lagu badelay "Wasaaradda" Waxa loola jeedaa hay’adda xukumada uga masuulka ah arrimaha qoyska iyo haweenka”
7. Erey-bixinta kelmada " Wasiirka" Waxa loola jeedaa Wasiirka Arimaha Bulshada iyo Shaqada. Waxaa lagu badelay "Wasiirka" Waxa loola jeedaa Madaxa hay’adda xukumada uga masuulka ah arrimaha qoyska iyo haweenka”
8. Qodobka 2aad oo ahaa “Qeexida Ereyadda Xeerka” waxaa loo badelay “Magaca Xeerka”.
9. Qodobka 3aad: (1) “In la dajiyo xeer waafaqsan ama la jaan qaadi kara dastuurka, minqiyaasyada caalami ee xaquuqaha aadamaha iyo mab;aadiida guud ee cadaaladda oo ku haboon waxna ka tari kara in la mamnuuco lagana hortago kufsiga iyo fal dambiyeedyada kale ee galmada” Waxaa lagu badelay “in la dajiyo xeer waafaqsan shareecada islaamka, dastuurka qaranka JSL, mabaadi’da guud ee caddaalada, qiyamka iyo dhaqanka suuban ee ummaddu leedahay”
10. Cinwaanka “CUTUBKA LABAAD: XADGUDUBYADA GALMADA” Waxaa lagu badelay CUTUBKA LABAAD: XADGUDUBYADA JINSIGA”
11. Cinwaanka “Qaybta kowaad: Fal Dambiyeed Kufsiga” Waxaa lagu badelay “QAYBTA 1AAD:KUFSIGA IYO XADGUDUBYADA JINSIGA”
12. Qodobka 6aad cinwaankiisa oo ahaa “Kufsi Xad-gudub ah” Waxaa lagu badelay “Ku-Xadgudub Keentay Kufsi/Kufsi Awood Sheegasho”
13. Qodobka 6aad: “Qof kastaa isagoo ujeedadiisu tahay inuu galo fal kufsi ah ee xubin jidhkiisa ka mida ama shay kale galiya xadigay doontaba ha gaadhsiisnaatee xubinta taranka ama xubin kale oo ka mid ah jidhka qof kale waxa galay faldabiyeed kufsi xad gudub ah, waxaana mutaysanayaa ciqaab u dhaxaysa Todoba iyo Toban ilaa Saddex iyo Labaatan sanadood oo xadhig ah.” Waxaa lagu badelay “Qof kastaa isagoo ujeedadiisu tahay samayn galmo ee xubin jidhkiisa ka mida ama shay kale galiya xadigay doontaba ha gaadhsiisnaatee xubinta taranka ama xaga dambe ee qof kale waxa uu ku sifoobay galayna faldabiyeed ku xad gudub kufsi/kufsi awood sheegasho, waxaana mutaysanayaa ciqaab u dhaxaysa Todoba iyo Toban ilaa Saddex iyo Labaatan sanadood oo xadhig ah”
14. Waxaa la saaray cinwaanka “Qaybta 2aad: Falalka xidhiidhka laleh Xad-gudubyada Galmada”
15. Cinwaankii marka hore ahaa “Qaybta 3aad: Diyaarinta iyo ka Qayb-qaadashada Faldambiyeedyo Xadgudub Galmo” Waxaa lagu badelay “QAYBTA 2AAD: DIYAARIN FAL DAMBIYEEDYO”
16. Qodobka 11aad: Waxaa laga saaray faqraddii 3aad oo u qornayd sidan “Qofkii isku daya in uu galo fal dambiyeedka ku xusan qodobkan, waxa uu mutaysanayaa xadhig ciqaabeed u dhaxeeya hal ilaa saddex sannadood.”
17. Qodobka 12aad: Waxaa laga saaray faqraddii 3aad oo u qornayd sidan “Qofkii isku daya in uu galo fal dambiyeedka ku xusan faqrada kowaad qodobkan, waxa uu mutaysanayaa xadhig ciqaabeed u dhaxeeya saddex ilaa shan sannadood.”
18. cinwaanka “Qaybt AFRAAD: kAYDINTA, DuubisTA iyo BaahinTA FAL XADGUDUB GALMO” Waxaa lagu badelay “QAYBTA 3AAD: DUUBIS IYO BAAHIN”
19. Qodobka 13aad: Waxaa laga saaray faqraddii 2aad oo u qornayd sidan “Qofkii isku daya in uu galo fal dambiyeedka ku xusan qodobkan, waxa uu mutaysanayaa xadhig ciqaabeed u dhaxeeya laba ilaa saddex sannadood.”
20. Qodobka 21aad: Waxaa lagu daray “Warbixinta baadhista caafimaad ee uu bixinaayo hawl-wadeenka caafimaadku waa in ayna si cad u qeexin ama sheegin in uu dhacay fal dambiyeed kufsi ama xadgudub jinsi ah”
21. Qodobka 38aad oo u dhignaa “Qof kasta oo haga, amra, dhiirigaliya, la taliya, abaabula, qasba, bilaaba, huriya, kala shaqeeya, gargaara ama qof kale ku caawiya inuu galo dambi ka dhan ah qodobada Xeerkan wuxuu muteysanayaa xukun ciqaabeed la mid ah ka uu mutaysto ama la saarao qofka dambiga galay (the principal offender).” Waxaa loo badelay ““Qof kasta oo haga, amra, dhiirigaliya, la taliya, abaabula, qasba, bilaaba, huriya, kala shaqeeya, gargaara ama qof kale ku caawiya inuu galo dambi ka dhan ah qodobada Xeerkan wuxuu muteysanayaa xukun ciqaabeed ku haboon dembiga inta uu ku leeyahay sida waafaqsan Xeerka Ciqaabta Guud”
22. Qodobka 39aad: Waxaa lagu daray “Eeddaysanaha haddii lagu waayo dembiga lagu soo oogay waxa uu yeelanayaa magdhow waafaqsan shareecada islaamka iyo wixii khasaare ee soo gaadhay muddadii ay ku socotay dacwaddu.”
Posted by Abdishakur Ali Mohumed (Good Lawyer) at 11:37 PM Links to this post
Calanka Qaranka JSL
Waxaan kuugu soo dhaweynayaa degelkani oo aad ka daalacan karto qoraalo ka hadlaya waayaha siyaasaddeed, dhaqaaale iyo bulsho ee Soomaalida. Degelkani wuxuu u abbuuran yahay horumarinta dhalinyarrada iyo daraasaynta nolosha Soomaalida.
Madmadoow ku jirin,
“Malafsade ha dhaco!
Xalaal-maal ha jiro!
Dadku waa masee,
Ha mudh-baxo cadligu!” - Gaarriye (AHUN)
Maqaalada Muhiimka ah
Faysal Cumar Mushteeg: Haldoorkii Fanka Soomaaliyeed ee uu Halabuurkiisu Mahadhooyinka Reebay
Bishii September 21keedii, sannadkii hore ee 2012ka waxaa magaalada Hargeysa lagu aasaasay Fanaankii weynaa, halabuurkii, Musigiistihii...
Qaybta 2aad: Lafagurka Sharci ee Xeerka Kufsiga Soomaaliland (Xeer Lr. 78/2018) W/Q. Garyaqaan Cabdishakuur Cali Muxumed
Qaybtan 2aad wax aan lafogur ku samaynaya qodobada sharci ee uu xeerku ka kooban yahay; intooda muhiimka ah. Waxa aan ku deddaalayaa in aa...
Hees Hawleed Ka Curatay Qoraalka Mujaahid Boobe
Bismilaahi Markii aan akhriyey taxanihii Cabdiraxmaan Aw Yuusuf Ducaale ( Boobe) ee cinwaankiisu ahaa: Magacaabistaydii Iyo Maagistaydii...
Dhammaan qoraalladii taxanaha ahaa ee aan ku lafoguray Xeerka Kufsiga iyo Xadgudubyada Jinsiga (Xeer Lr. 78/2018) oo aan hal dhukumenti is...
Qaybtan 3aad ee lafogurka qodobada sharci ee Xeerka Kufsiga (Xeer Lr. 78/2018) waxa aan ku lafogurayaa qodobada la xidhiidha fal dambiyeed...
Kootada Haweenku Waa Sillan-Sugan!!
Waxaa Qoray Garyaqaan Cabdishakuur Cali Muxumed (Good Lawyer). Hordhac Sannadkii 2007dii ayey haweenka Somaliland codsa...
Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Wuxuu u Baahan Yahay in la Abuuro Xafiiska Qareenka Dadweynaha (Ombudsman)
11. Hordhac Markii ugu horeysay taariikhda adduunka ee la abbuuro xafiis noociisu yahay xafiiska Qareenka Dadweynaha ( Ombudsman ) ...
FAALLO: Xeerka Saxaafadda, Xeerka Ciqaabta Guud iyo Dacwaddaha Saxaafadda.
Waxaa xaqiiqo jirta ah in saxaafadda xad-gudub loo geysto iyaduna ay geysato; waxaynu wada ognahay in xukumad kasta oo Somaliland soo mar...
Dharaaro Xasuustood: W/Q. Prof. Maxamed Siciid Gees. Qaybtii 34aad
Boqolkii mid baan garanayaa Biixiyaw Harar eh Bidhan arag markii aan socdaa qof i bariidshaaye Jamac Xiid Aqoonyahan/Ruug-cada...
Qabyaaladda Siyaasadeed Waa Qaran Dumis: Somaliland Halis bay ku Jirtaa - W/Q Rashiid Sh. Cabdillahi (Gadhwayne)
Fadlan Riix Halkan Si aad Qoraalka u Akhrisato
Abdishakur Ali Mohumed (Good Lawyer)
Email-kaaga Qoraaladayda Kala Soco
ELMI LAW FIRM
Xasuus Dhawrka Mareegta
LAFOGURKA SHARCI EE QODOBADA XEERKA KUFSIGA SOOMAA...
Qaybta 3aad: Lafogurka Qodobada Sharci ee Xeerka K...
Qaybtii 2aad Intii ka Hadhsanayd: Lafogurka Sharci...
Qaybta 2aad: Lafagurka Sharci ee Xeerka Kufsiga So...
FAALLO – Xeerka Kufsiga ee Antonia Mulvey (Xeer Lr...
Ubbadaasi jabaysa een
U uus-miirtay darteed,
Dib waxay ka ahaataba
Ishii cawri taqaan iyo
Ka ilaali wed mooyee,
Wax kaleeto illoow!
Maansadii ERGO 1992, Gaarriye (AHUN)
Mareegaha aanu Xidhiidhka Leenahay
Fariin Isoo Dir ama Talo Igu Kordhi
Dadka Soo Booqday
Goodlawyer4@Copyright. Travel theme. Powered by Blogger.